Home News Socdaalka Morgan Ee Tukaraq Maxeey ka dhigan tahay!!
Socdaalka Morgan Ee Tukaraq Maxeey ka dhigan tahay!!
Deegaanka tukaraq ee Gobolka Sool ayaa waxaa kusii qul qulaya saraakiil ciidan oo ka socda puntland halkaas oo mudo laba maalin ah ay ku wada dagaalamayeen ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland.
Saacadihii lasoo dhaafay waxaa halkaasi gaaray saraakiil ciidan oo ka kala yimid magaalooyinka Garoowe Nairobi iyo muqdisho, iyaga oo la kulmay saraakiisha dagaalka hoggaamineysa.
Warar hoose oo aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in deegaanka tukaraq uu gaari doonaan saraakiil uu ka mid yahay Janeraal Maxamed Siciid Xeris (Morgan) oo ah musharax madaxweynaha Puntland kaas oo dalka dibadiisa ku maqan.
Janeraalka ayaa waxaa markii uu tago tukaraq uu lakulmi doonaa taliyaha Ciidamada puntland janeraal Siciid dheere oo ku sugan jiida hore ee dagaalka oo ay isku-hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland.